Kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 ayaa laga soo sheegay Tonga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Tonga News Breaking » Kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 ayaa laga soo sheegay Tonga
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Tonga News Breaking • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Raiisel wasaaraha Tonga Pohiva Tu'i'onetoa
Raiisel wasaaraha Tonga Pohiva Tu'i'onetoa ayaa sheegay in dowladdu ay qorsheyneyso inay ku dhawaaqdo isniinta in xayiraad qaran la soo rogi doono iyo in kale.
Xukuumadda Tonga ayaa ku dhawaaqi doonta isniinta in jasiiradda la gelin doono xannibaad qaran.
Waxaa jiray hal kiis oo COVID-19 ah oo ka mid ah 215 rakaab ah oo ka yimid magaalada Christchurch.
Qiyaastii 31 boqolkiiba dadweynaha Tonga ayaa si buuxda loo tallaalay halka 48 boqolkiiba ay qaateen ugu yaraan hal mar.
Mas’uuliyiinta dalka Togan ayaa sidaas ku dhawaaqay Tonga hadda kama xoroobin coronavirus ka dib rakaab ka soo duulay Christchurch, New Zealand ayaa laga helay fayraska COVID-19.
Kani waa infekshankii ugu horreeyay ee COVID-19 ee laga diiwaan geliyo Boqortooyada Polynesia tan iyo bilowgii cudurka faafa ee coronavirus-ka adduunka.
Ciwaanka maanta ee raadiyaha, Raiisel wasaaraha Tonga Pohiva Tu'i'onetoa ayaa xaqiijiyay in uu jiro hal kiis oo COVID-19 ah oo ka mid ah 215 rakaab ah oo ka yimid magaalada Christchurch.
Tu'i'onetoa wuxuu sheegay in dowladdu ay qorsheynayso inay ku dhawaaqdo Isniinta in xannibaado qaran la soo rogi doono iyo in kale.
Dhanka kale, ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka dalbaday dhammaan dadka reer Tonga inay u hoggaansamaan fogeynta jireed iyo inay raacaan xeerarka la xiriira coronavirus.
Sida laga soo xigtay TongaMadaxa fulinta ee wasaaradda caafimaadka Siale 'Akau'ola, shaqaalaha caafimaadka, booliiska iyo dhammaan shaqaalihii ka shaqaynayay garoonka diyaaradaha ee Fua'amotu markii ay diyaarada Christchurch timid ayaa la dhigay karantiil. Waxa uu intaa ku daray in dhammaan dadkii ka shaqaynayay agagaarka diyaaradda la tallaalay.
Christchurch Rakaabka duulimaadka waxaa ku jiray shaqaale xilliyeedka iyo xubnaha kooxda Olombikada Tonga.
Tonga waxay ku taal waqooyi bari ee New Zealand, waxayna hoy u tahay ilaa 106,000 oo qof.
Qiyaastii 31% dadka reer Tonga ayaa si buuxda loo tallaalay halka 48% ay qaateen ugu yaraan hal qiyaas, sida laga soo xigtay kooxda cilmi-baarista ee Our World in Data.
Tonga waa mid ka mid ah quruumaha yar ee ku haray adduunka ee ka fogaaday inuu dillaaco COVID-19. Sida qaar badan oo deriskeeda ah, go'doominta Tonga ayaa ka caawisay inay ilaaliso ammaankeeda laakiin waxay wajaheysaa caqabado waaweyn haddii fayrasku qabsado sababtoo ah nidaamkiisa caafimaad ee kheyraadkiisu hooseeyo.
Dalka u dhow ee Fiji ayaa ka fogaaday faafitaanno muhiim ah ilaa Abriil, markii nooca Delta ee coronavirus uu ka dillaacay silsiladda jasiiradda, oo uu ku dhacay in ka badan 50,000 oo qof oo dilay ugu yaraan 673.